Custom Board Game Card Printing Manufacturer | HS Boardgame Kudhinda
HS yanga ichipa bhodhi mutambo wekudhinda uye kurongedza zvakagadziridzwa sevhisi kubvira 2002.
Kudhinda Mabhuku Emifananidzo
Pepa Bhokisi Packaging
18 makore nyanzvi kurongedza uye tsika bhodhi mutambo mugadziri
Yakagadzirirwa dhizaini yekudhinda chigadzirwa uye kurongedza, gadzira yakasarudzika package kune yako brand image uye wedzera kushambadzira kwechigadzirwa chako. Kambani yeHS boardgame yekudhinda ine anopfuura makumi mana ane ruzivo rwekurongedza zvikwata zvekugadzira, anopfuura makore gumi echiitiko cheindasitiri, akarongedzerwa kune zvaunoda, chete kune chako chigadzirwa chakasarudzika chakavanzika, chakaramba kufanana, zvigadzirwa zvinotengeswa kuJapan, Germany, United States nezvimwe. nyika, maitiro ekugadzira ave achizivikanwa zvakanyanya.
Hongsheng, Seimwe yeakanakisa makadhi ekudhinda uye akasarudzika bhodhi mutambo mugadziri muChina, Anonyanya hunyanzvi mukudhinda mutambo webhodhi, kudhinda mabhuku emifananidzo, matatu-dimensional kudhinda mabhuku, evana ekudzidzisa emagetsi matoyi, zvekudzidzisa, boutique mavara mabhokisi, uye yakakwirira- magumo ezvipo mabhokisi nezvimwewo, nyanzvi yekupa vatengi zvakasiyana siyana zvakadhindwa zvigadzirwa.
OEM Tailor Yakagadzirwa Kutamba Kadhi Mutambo Tsika Kudhinda mhuri Bhodhi Game
Kubva 2002, semugadziri akananga uye ane hunyanzvi weOEM/ODM uye achitengesa kunze kwenyika kuChina, HongSheng Manufactory inyanzvi mukugadzira mitambo yebhodhi, mitambo yemakadhi, makadhi ekutamba, zvikamu zvemutambo nebhokisi rekurongedza.
Hongsheng Kudhinda - Yemhando yepamusoro Yakagadzirirwa Yakakosha PET yakajeka hwindo refoni kesi yekurongedza bhokisi rine hoko yepurasitiki isina Kubatanidzwa
Kusvika pamwero mukuru, kutaridzika kweMapepa Mabhokisi, maficha, mapakeji, nezvimwe zvinogona kuva zvinhu zvakakosha zvinokwezva vatengi. Mukuita kwekuvandudza bhodhi rekudhinda bhodhi, kudhindwa kwebhokisi remavara, bhokisi remapepa, bhuku, vagadziri vedu vanga vachitevera zvazvino maitiro uye kuongorora zvinoravira vatengi, nekudaro, kugadzira bhodhi mutambo kudhinda, bhokisi remavara kudhinda, bhokisi repepa, bhuku rakasiyana. muchimiro chayo uye maitiro ekugadzira. Kana ari maficha ayo, isu tinoedza kuita kuti ive yakatanhamara nekutora yakakwirira-level zvinhu mbishi.
Hongsheng Kudhinda - Tsika fekitori mutengo bepa bhokisi High Quality mbozha mbozha kurongedza bhokisi mugadziri webepa kudhinda kurongedza
Tsika fekitari mutengo mapepa bhokisi High Quality mbozha mbozha bhokisi kurongedza bhokisi mugadziri pepa kudhinda packaging akahwina tarisiro yepamusoro uye kurumbidza kubva vatengi.Technology inoshandiswa kuzadzisa zviri nani musika zvinodiwa.Izvo zvirokwazvo accommodate vatengi 'zvakasiyana hukasha uye kuravira.
Hongsheng Kudhinda - Yemhando yepamusoro dhizaini yemukati mutambo tokeni uye makadhi CMYK kudhinda kwevana Kutengesa Kutengesa.
Muchidimbu, kudhindwa kwebhodhi remutambo, kudhinda kwebhokisi remavara, bhokisi repepa, kuita kwebhuku uye hunhu hwaro zvinonyanya kusarudzwa nezvinhu zvaro. Panyaya yezvakagadzirwa zveBoard Game, ivo vakapfuura nemuyedzo wakawanda pane avo emakemikari zvikamu uye kuita. Nenzira iyi, mhando yechigadzirwa inovimbiswa kubva kunobva. Parizvino, chigadzirwa chakaedzwa kuve cheakanakisa uye zvimwe zvinhu.
Gadzira yakasarudzika brand mufananidzo wekurongedza kwako, vandudza chigadzirwa chekushambadzira simba.
Tine anopfuura makumi mana ane ruzivo rwekurongedza dhizaini zvikwata uye anopfuura makore gumi eruzivo rweindasitiri. Tinogona kugadzirisa zvigadzirwa zvedu maererano nezvatinoda. Isu tinokuitira ivo chete. Tinoramba kufanana.
Zvigadzirwa zvinotengeswa zvakanaka muJapan, Germany, US nedzimwe nyika, uye maitiro ekugadzira ave achizivikanwa zvakanyanya.
Tichitarisa pane yakasarudzika bhodhi yemutambo kadhi kudhinda uye kurongedza kwemakore gumi nemapfumbamwe, kambani yekuJapan yematoyi yedzidzo yakasarudza shamwari. Dzimbahwe reDongguan rine 8,500 square metres yezvivakwa zvefekitari zvine simba uye vanopfuura mazana matatu evashandi vehunyanzvi nehunyanzvi. MunaGunyana 2017, bazi reHuizhou, iro rinofukidza nzvimbo inopfuura 20,000 square metres, rakaiswa zviri pamutemo kushanda. Akahwina mibairo yakawanda senge "Akanaka Mutengesi weGuangdong Province", "Supplier Evaluation Certificate", "The Eighth Top Ten Boss Awards muGuangzhou District", "The Eighth Top Ten Boss Awards", Inoenderana neISO9001 quality management system certification bhizinesi.
HAMA nekambani yedu tasvika pachibvumirano chekushandira pamwe kwenguva refu
Hongsheng inokupa iwe nehunyanzvi tsika bhodhi mutambo kadhi kudhinda uye kurongedza mhinduro!
Kubva payakavambwa muna 2001, HS boardgame kambani yekudhinda yanga yakavakirwa padzidziso ye "mutengi kutanga, mhando yekutanga; kugona, kuenderera mberi kwekuvandudza." Kubva pamusika, yakakunda kuvimba uye kutsigirwa kwevatengi kubva kumativi ese ehupenyu. Yakagadzira yakakwana yemhando system muna 2009, yakapasa ISO9001: 2015 yepasirese yemhando manejimendi system certification, yakawedzera chiyero chayo muna 2010 kuvhara nzvimbo ye8,500 square metres, yakavhura bazi muHuizhou muna 2017, inobata nzvimbo ye30,000. square metres, uye parizvino ane vanenge 600 vashandi , Kune 3 bhizinesi zvikamu: bhodhi mutambo bhizinesi dhipatimendi, yevana dzidzo yemagetsi matoyi bhizinesi dhipatimendi, boutique packaging bhizinesi dhipatimendi.
Kudhinda hukuru hwebhizinesi: mitambo yebhodhi, mabhuku emifananidzo, mabhuku matatu-mativi, matoyi emagetsi ekudzidzisa evana, zvekushandisa pakudzidzisa, mabhokisi eruvara rweboutique, mabhokisi ezvipo epamusoro, nehunyanzvi anopa vatengi zvigadzirwa zvakasiyana zvakadhindwa. Midziyo yekugadzira: Heidelberg muchina wekudhindisa, muchina wemafuta, muchina wekupolisha, muchina wekuchera, muchina wedoro, jekiseni rekuumba muchina, SMT, waya yekubatanidza muchina, blister muchina, muchina wedhijitari, mubhedha wekucheka, muchina wekupeta, etc. Hunhu husimbiso: neseti yakazara. yemhando yemidziyo yekuyedza uye timu yehunyanzvi yehunyanzvi kuti ive nechokwadi chemhando yevatengi vanodhinda zvigadzirwa.